Maitiro Ekumisikidza 3-Mapoinzi Kuvhenekera Yako Mhenyu Mavhidhiyo | Martech Zone
Isu tanga tichiita mamwe maFacebook Live mavhidhiyo emutengi wedu tichishandisa Swatch Studio uye kunyatsoda iyo yakawanda-vhidhiyo kutenderera chikuva. Imwe nzvimbo yandaida kugadzirisa pairi yaive yedu kuvhenekera, zvakadaro. Ini ndiri vhidhiyo newbie kana zvasvika kune aya marongero, saka ini ndicharamba ndichivandudza manotsi aya zvichienderana nemhinduro uye kuyedzwa. Ndiri kudzidza tani kubva kune nyanzvi dzakandikomberedza zvakare - mamwe acho andiri kugovana pano! Kune zvakare toni yezvakakura zviwanikwa pamhepo.
Isu tine matenga gumi nematanhatu mu studio yedu ine inopenya yakajeka mwenje yemafashama eUS padenga. Zvinoguma nemumvuri unotyisa (uchinongedzera wakananga pasi)… saka ndakabvunza vedu videographer, AJ we Ablog Cinema, kuti uwane mhinduro isingadhuri, inotakurika.
AJ yakandidzidzisa nezve 3-points mwenje uye ndakakatyamadzwa nekungotadza kwandakaita nekuvhenekesa. Ini ndaigara ndichifunga kuti mhinduro yakanakisa ingave mwenje we LED wakakwenenzverwa pane kamera inonongedza yakanangana naani watinenge tichikurukura naye. Zvakashata. Dambudziko nechiedza chairo pamberi penyaya ndechekuti rinosuka zviyero zvemeso pane kuvarumbidza.
Chii chinonzi 3-Mheni Mwenje?
Chinangwa chemwenje ye3-poindi ndeyekusimbisa uye kusimbisa kukura kweiyo sosi (s) pavhidhiyo. Nekuisa mwenje zvine hungwaru pakakomberedza nyaya, sosi yega yega inovhenekera chikamu chakasiyana chechinhu ichi uye inogadzira vhidhiyo ine kureba kukuru, hupamhi, uye kudzika… zvese uku uchibvisa mimvuri isingaoneke.
Matatu-pointi mwenje ndiyo inowanzo shandiswa nzira yekupa hukuru mwenje mumavhidhiyo.
Iwo Mwenje Matatu mu3-Mapoinzi Mwenje Ari:
Kiyi Chiedza - ichi ndicho chekutanga mwenje uye chinowanzo kuve kurudyi kana kuruboshwe kwekamera, 45 ° kubva kwairi, ichinongedzera 45 ° pasi panenyaya. Iko kushandiswa kwekuparadzira kwakakosha kana mimvuri yakanyanya kuoma. Kana iwe uri panze muchiedza chakajeka, unogona kushandisa zuva sechiedza chako.
Zara Chiedza - iyo yekuzadza mwenje inopenya pane chidzidzo asi kubva padivi kona kuti udzikise mumvuri unoburitswa nekiyi mwenje. Inowanzo kupararira uye inenge hafu yekupenya kweye kiyi mwenje. Kana mwenje wako uchinyanya kupenya uye uchigadzira mumvuri wakawanda, unogona kushandisa chiyeuchidzo kupfavisa mwenje - uchinongedzera kuzadza mwenje pachigadziko uye nekuratidza mwenje wakaparadzaniswa panenyaya.
Chiedza chekumashure - inozivikanwawo semupendero, vhudzi, kana mwenje wepafudzi, mwenje uyu unovhenekera pachinhu kubva kumashure, uchisiyanisa chidzidzo kubva kumashure. Vamwe vanhu vanoishandisa parutivi kusimudzira bvudzi (rinozivikanwa se kicker). Vazhinji vanyori vemavhidhiyo vanoshandisa monolight izvo zvakanangisa zvakanangana pachinzvimbo chepamusoro chakapararira pamusoro.
Ive neshuwa yekusiya chinhambwe pakati penyaya yako neshure kuitira kuti vatariri vako vatarise kwauri kwete pane zvakakukomberedza.
Maitiro Ekumisikidza 3-Point Mheni
Heino yakanakisa, inodzidzisa vhidhiyo maitiro ekumisikidza mushe 3-poipi mwenje.
Yakakurudzira Mwenje, Ruvara Kupisa, uye Diffusers
Pakurudziro yemuteereri wangu wevhidhiyo, ndakatenga iyo inotakurika-inotakurika Aputure Amaran mwenje mwenje uye 3 ye chando diffuser kits. Mwenje inogona kupihwa magetsi yakanangana nemapakeji maviri ebhatiri kana kubatika mukati pamwe nemagetsi anotevera. Isu takatotenga mavhiri kuitira kuti tikwanise kuamonera zvakapoteredza hofisi pazvinenge zvichidiwa.
Aya mwenje anopa kugona kugadzirisa iyo tembiricha tembiricha. Kumwe kwekukanganisa kunoitwa nevazhinji vanyori vemavhidhiyo ndeyekuti vanosanganisa tembiricha yemavara. Kana iwe uri mune yakavhenekera mukamuri, iwe ungangoda kuvhara chero mwenje imomo kuti udzivise kukaka kwekushisa kwemavara. Isu tinoseta mapofu edu, kudzima mwenje wepamusoro, uye nekuisa mwenje yedu yeUSL kuenda ku5600K kuti ipe tembiricha inotonhorera.
Isu tichave zvakare kuzoisa pamusoro pekupfava vhidhiyo studio mwenje pamusoro petafura yedu yepodcasting kuitira kuti tikwanise kurarama mapikicha epodcast kuburikidza neFacebook Live uye Youtube Live. Iri ibasa rekuvaka sezvo isu tichifanira kuvaka furemu inotsigira iyo futi.
Aputure Amaran mwenje mwenje Frost Diffuser Kits
Kuzivisa: Tiri kushandisa edu ehukama eAmazon zvinongedzo mune ino posvo.
Tags: 3-poindi mwenje5600kaputureaputure amaranback backyakanakisa mwenje kitkuzadza chiedzabvudzi chiedzachiedza chinokoshakickerkicker mwenjechiedza chakajekalight reflectordzidziso yakajekaChiedzachigadziko chemwenjezviedzamonolightRefreshswitcher studiovhidhiyo kuvhenekeravhidhiyo yekuvhenekesa kitmwenje yevhidhiyo